Odeessa Shiraaf I Gochaalee Hammeenya Wayyaanee Saaxiluu | QEERROO
Odeessa Shiraaf I Gochaalee Hammeenya Wayyaanee Saaxiluu
Gabaasa Qeerroo Amajjii 15, 2015
Amajjii 08, 2015 godina Baalee irratti buufanni bobo’aa tokko qaama hin beekamneen gubachuu isaa odeessi achii irraa Qeerroo dhaqqabe ni ibsa. Dhimma kanaan walqabatee waanti ibsame kan hin jirre yeroo ta’uu uummanni mootummaa Wayyaanee irratti aarii akka qabu ni muldhata. Yeroo ammaa maqaa poolisoota humna addaa jechuun Somaalee irraa sochu’u fi mootummaa Wayyaanee irraa gargaarsa argatu naannoo sanatti bobba’ee jiru naannoo Ona Ginir irraa loon/saawaa uummataa fi qabeenya saamaa jiraachuu kan bira ga’ame yeroo ta’u haalli kun uummata Oromoo naannoo sana daran kan dheekkamsiise fi ofirraa ittisuuf dirqama akka ta’ee jiru himaama jira. Dhimma kun hammaatee Amajjii 14, 2015 iraa eegalee dhukaasa uummatatti banuutu dhaga’ama.
Wayyaaneen kan ofii qabeenya uummata Oromoo bifa adda addaan saamaa jirtu xiqqaannaan yeroo ammaa saba ollaa Oromiyaa qubatan ijaaruun Oromoo irratti bobbaasuu kan itti fufte yeroo ta’u kun ammoo addattii Godina Baalee Ona Ginir irratti Amajjii 13 fi 14, 2015 irraa eegalee bifa addaan itti fufuu isaa odeessi achirraa Qeerroo dhaqqabe ni ibsa.
Kun kanaan osoo jiruu godina Shawaa Bahaa ona Bishooftuu keessatti Wayyaanonni uummata sabboontota fi poolisoota Oromoo ta’an irratti xiyyeeffattee ajjeesisuuf shira qopheessuun naannoo sanatti nama erguun ishee saaxilame. Dhimma kana akka raawwatu poolisootuma keessaa uummata keessatti kan ramaddee yeroo ta’u poolisootni Oromoo sabboontota ta’an dubbii kana irra ga’uun shira kana fashalsuuf jala bu’a turanii nama kana eega irra ga’anii booda isaa uummata saamu itti dhaqqabuun Amajjii 12, 2015 nama kana qabuuf yeroo bobba’anitti dhukaasa itti banuun poolisoota kana keessaa nama tokko madeessuun dhaga’ame. Nama kana boodaan namoonni hedduun akka jiran kan mirkaana’e yeroo ta’u yakkamaan kun ammallee toohannoo jala kan hin oollee fi wayyaaneen akka qindeessitee akka ergite mirkana ta’uu isaa poolisoota magaala Bishooftuu irraan odeessaan Qeerroo dhaqqabe ni mirkaneessa.
Gama kaaniin Godina Shawaa Lixaa Ona Midaa-qanyi irraa maqaa ABOtiin yakkuun nama maqaan isaa yeroof hin himamne fi waraana Dargii ture tokko Boombii 2F1 jedhamuti mana isaatii argame jechuun qabdee dhabamsiisuun ishee beekame. Namni kun uummata naannoo sanaa birratti saabboonummaan kan beekamu, shaakkii irraa kaatee mana isaa sakkata’uun boombii aragadhe jettee Amajjii 10, 2015 tohannoo jala akka oolchite yeroo ta’u haga ammaa eessatti akka hidhame fi bakka buuteen isaa kan hin baramne ta’uuti odoossi naannoo sanaa ba’e ibsa.
Odeeffannoon biraan gara Yunivarssitii Kiloo 4 irraa dhufe ammoo barataa Tigree of-fandhisee du’ee argameetti Oromoon yakkamuutu dhaga’ama. Oromoota shororkeessuuf jecha yeroo ammaa bakka namni hin arginetti abbaan fedhe yoo du’e Wayyaaneen Oromoo itti yakkuun baratamaa dhufee jira. Barataan lammii Tigree Computer Science waggaa 2ffaa tokko jaalalatu naqabe jedhee dhiphina keessa jiraachuu himachaa kan ture Amajjii 11, 2015 of-fandhisuu irraan kan ka’e Oromootatu ajjeessee fandhise jechuun Wayyaaneen sobaan oduu afarsaa jiraachuuti oduun naannoo sanaa nu ga’e mirkaneessa.
Karaa biraa Godina Qellam Ona Jimmaa Horroo dargaggoonni jiraatan kaardii filannoo fudhachuuf gara waajjira Wayyaane naannichaa deeman dargaggoota Ona kanaa irraa guutummaatti shakkii qabna, isaan jaarmayaa Qeerroo, ABOn jeequmsaaf nutti ergamani jechuun kaabinootni OPDO Ona sanaa arii’an. Haaluma kanaan dura waraaqaa eenyummaa fudhattan male kaardii fudhachuu hin dandeessan, dargaggoonni aanaa kanaa ABO, kaardii filannoo barbaaduun kun waan karoorfatan qabdu jechuun arrihatamuu gabaasti hoogganasa Qeerroo Ona sanaa hubachiisee jiree jira. Akka gabaasa kanaatti kaabinootni Wayyanee naannoo sanaa filannoo isaanii as adeemu kanatti jeequmsi nutti ka’uun waan hin oolle jechuun garanumaa sodaa qaban himachaa akka jiran gabaasti kun ni mirkaneessa.
Dargaggoonni naannoo kanaa odeessa ABOdhaa dabarsu, uummata nurratti ijaaraa jiru, uummanni kaardii hanga yoonatti fudhachuu diduun olola dargaggoota Qeerroon ijaaramanii jiran kana irraa ta’uu uummata walitti qabuun doorsisuu fi yaaddoo himachaa jiru. Ona Anfilloo gandoota 28 jiran keessaa namootni muraasati yeroo galmaa’an, ganda tokko qofaa keessaa hanga nama 160 ol ta’antu kaardii filannoo hin fudhanne, kun ammoo mootummaattii mataa dhukkubbii fi gaaffii guddaa ta’aa jira jechaa jiru.
Guyyaa kaardiin filannoo hiramuu eegalee qabee hanga ammaatti gandoonni kaardii tokko illee fudhachuu hin dandeenye ykn guutummaatti dhiise fi hin kennamin hafe akka jiru fi sababoota kanaa fi kana fakkaatani irraa kan madde naannoo sanaa akka walii galaatti gamaaggamaan dhiphachaa jiraachuutu gabaasti Qeerroo nannoo sanaa ibsa.
1 thought on “Odeessa Shiraaf I Gochaalee Hammeenya Wayyaanee Saaxiluu”
Makonnin on January 17, 2015 at 2:56 pm said:
…sanas ta’ee kanas ta’u umuriin diinaa gabaabbatte kanatti xummuura haa goonu!
Leave a Reply to Makonnin Cancel reply